Nhau - Mirayiridzo yekushanda uye kuchengetedza aminoguanidine bicarbonate
Mirayiridzo yekushanda nekuchengetedza aminoguanidine bicarbonate
Aminoguanidine bicarbonate ikemikari ine chepfu, saka ine zvido zvekuchengetedza. Izvo zvinodikanwa kuzvichengeta kuti uve nechokwadi chekuchengetedzeka kwezvigadzirwa nevashandi. Heano mamwe matanho ekuchengetedza aunofanira kugona.
1. Inofanirwa kuchengetwa munzvimbo inotonhorera uye ine mweya, nekuti aminoguanidine bicarbonate haina kugadzikana kana ichipisa. Kana tembiricha yapfuura 50 ℃, inotanga kuora, izvo zvinokanganisa mashandisiro ayo. Naizvozvo, teerera kudzora tembiricha uye mwando weimba yekuchengetera.
2. Aminoguanidine bicarbonate ine chepfu. Inofanira kuchengetwa mune yekuchengetera yakasarudzika ine chengetedzo zviratidzo, izvo zvisingakwanise kushandiswa nevanhu pamadiro.
3. Ita basa rakanaka mukutungamira kwemazuva ese, tora uye shandisa iyo aminoguanidine bicarbonate inofanira kuchengetwa mugwaro rakanaka, kuitira kudzivirira zvinhu kubva pakurasika kana kushandiswa zvisina tsarukano.
Naizvozvo, panguva yekuchengetedza aminoguanidine bicarbonate, izvo zvinhu zviri pamusoro zvinofanirwa kubhadharwa zvakanyanya, kuitira kuti uve nechokwadi chekuchengetedza.
Aminoguanidine bicarbonate inofanira kubhadharwa zvakanyanya mukushandisa, nekuti ikemikari ine chepfu. Kushandiswa kwakakodzera kunogona kuve nechokwadi chekuchengetedza kwevashandisi. Heano mashoma ekuchengetedza mashandiro zvinhu zvaunofanira kugona usati washandisa aminoguanidine bicarbonate.
1. Kana vachishandisa aminoguanidine bicarbonate, vanoshanda vanofanirwa kutarisisa kuchengetedzwa kwekuchengeteka. Dzivisa kusangana kwakananga kweaminoguanidine bicarbonate nemaziso uye neganda, zvikasadaro zvinokonzeresa kukuvadza kukuru kumuviri.
2. Teerera kudzivirira kwekudzivirira uye kufashukira, uye nyatso tarisa kuti usarega aminoguanidine bicarbonate ichipinda mupombi yetsvina, zvikasadaro inosvibisa sosi yemvura.
3. Usati uye mushure mekushandisa aminoguanidine bicarbonate, bata magurovhosi akamboshandiswa nokungwarira. Mhuka dzinofanirwa kutarisisa hutachiona.
Mune izwi, kushandiswa kweaminoguanidine bicarbonate kwakanyanya. Kana chete ikashandiswa nemazvo ndipo painogona kuve yakachengeteka.